यस्ता संकेत देखिएभने सोच्नुहोस् कलेजो खराबी हुँदैछ, यी लक्षणलाई गर्दै नगर्नुहोस् वेवास्ता – Sandesh Press
July 22, 2021 300
कतिपय व्यक्तिको कलेजोले सही ढंगले काम गरिरहेको हुँदैन। यद्यपि यसबारे उक्त व्यक्ति बेखबर हुन्छ। जब समस्या चर्को बन्छ तब मात्र कलेजोमा गडबडी भएको थाहा हुन्छ। कलेजोले सही ढंगले काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर सुरुदेखि नै सतर्क रहनुपर्छ।
कलेजोले सही ढंगले काम गरिरहेको छैन भने त्यसको लक्षण एवं सकेत देखापर्छ। उक्त संकेतलाई बुझेर सही समयमा उपचार गरियो भने सम्भावित खतराबाट बच्न सकिन्छ। अतः यी पाँच लक्षण हुन्, जसले तपाईंको कलेजोमा केही गडबडी छ भनेर संकेत गर्छ। यी संकेतलाई देखापरेमा तुरुन्तै चिकित्सककहाँ भेट्नुपर्छ।
Prevकाठमाण्डौमा बढ्यो खतरा, के अब निषेधाज्ञा हुन्छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारि गर्यो यस्तो सूचना (विज्ञप्तिसहित)
Nextयी तीन जना चम्सुरीलाई मिर्गौला दिन तयार भए,कहिले गरिँदैछ प्रत्यारोपण?
निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै आज काठमाडौँ उपत्यकामा ह्वात्तै बढ्यो कोरोना संक्रमित